Iyi ndiyo nzira iyo iPhone 7 nzvimbo grey ingave | IPhone nhau
Kana isu taifanira kutaura chimwe chinhu chatiri kujekesa nezve iyo iPhone 7, isu taizoti ichavhurwa munaGunyana. Ipapo runyerekupe rwakawanda rwunotenderera, senge kuti ichave iine dhizaini yakafanana neiyo iPhone 6 ine zvishoma tweaks, kusavapo kweiyo headphone chiteshi, pamwe vaviri vatauri uye makuru kamera. Runyerekupe rwazvino rwekupinda munzvimbo inoona kuti iPhone 7 nzvimbo pfumbu ichave iine rima rakanyanya toni pane izvo zvatakaona pane iyo iPhone 6s.
Iyo iPhone 4S yaive yekupedzisira kupa nhema kune ese kumberi nekumashure. Kutanga neiyo iPhone 5, iyo nhema / nzvimbo grey modhi toni yanga ichirasikirwa nemhepo, muchidimbu nekuti iwo ruvara rwealuminium bezels rwakarasika. Kana runyerekupe rwakauya kwatiri kubva kuMac Otakara chiri chechokwadi, iyo nzvimbo grey iPhone 7 inogona kunge iri semifananidzo yeiyi show concepts de AppleDesigner (wechipiri) uye ShaiMizrachi (chekutanga).
Space Grey iPhone 7 Concepts
Mune ese ari maviri mazano isu tinogona kuona izvo kanyanga zvisungo ari pamakona epamusoro neepasi uye iyo kamera yakakura uye yave padhuze nekumucheto. Panyaya yeiyo yakagadzirwa naShaiMizrachi, vanoonekwa zvishoma zvishoma nekuti yaisanganisira grey, apo chinhu chakajairika mune ino kesi ndechekuti vaive vatema zvachose. AppleDesigner yakagadzira mbiri, imwe yakasviba senge iyo iyo runyerekupe inovimbisa uye imwe ine girazi kumashure, iyo yaizopa iyo iPhone 7 mufananidzo wakafanana neiyo iPhone 4S, ichiponesa madaro. Hapana kana imwe yemafungiro aya inoratidza kuti inguva yakaita sei grey iPhone 7 Plus yaizotaridzika, asi misiyano ingave ndeyekuti kamera ichave yakakura uye kuti pazasi paizove neiyo Smart Connector.
Ini ndinofanira kubvuma kuti iyo yakasviba ini ndinoona iyo iPhone, zvakanyanya ini ndoda kudzokera kune nhema. Iwe unofungei nezve aya maviri nzvimbo grey iPhone 7 pfungwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone Concepts » Hezvino izvo izvo nzvimbo grey iPhone 7 inogona kutaridzika
X kupedza iPhone nhema
Apple patent system kuitira kuti urege kurekodha pamakonzati